SUSE Linux VS Ukpu okpu? | Site na Linux
SUSE Linux abanyela oru a OpenStack, maka nke ọ bụ distro ọzọ na-esonye n'ọgụ maka ịdị elu na ahịa nke ịgbakọ na ọrụ igwe ojii, ọgụ n'etiti Red Hat megide…. nke ọma ... megide ndị ọzọ niile HAHA.
En ihe ntinye emere na SUSE blog Enwere ike ikwenye nke a, agbanyeghị ọtụtụ ga-ajụ ... Kedu ihe bụ OpenStack?
M ga-ahapụ otu obere ihe si GenBeta:
OpenStack Ọ bụ oru ngo nke ụlọ ọrụ Rackspace duziri, nke kpebiri ịhapụ koodu maka Cloud Cloud na Cloud Servers ọrụ n'okpuru ikike Apache 2.0. Koodu a bu isi nkuku nke OpenStack, na enye ndi oru ma obu ulo oru ohere mepụta ọrụ igwe ojii gị.
Ekwadoro m ileta isiokwu a (site na GenBeta),, n'ihi na nke a na-akọwa nke ọma ihe OpenStack bụ: OpenStack, emeghe ígwé ojii Mgbakọ
Ọbụghị naanị EBU dị n'otu nkwekọrịta a, ụlọ ọrụ dịka Canonical, HP na Dell sokwa na ọrụ a.
Ọ na-eme nke ahụ Red Hat chọrọ ka ezigbo ụlọ ọrụ, ịbụ onye ndu na ihe niile metụtara Open Source ma ọ bụ GNU / Linux, ebe echiche m nke onwe m bụ na ọ ga-aka mma ikesa ihe niile, ya bụ, nke ọ bụla distro na ọdịiche ya nke bụ onye ndu na ahịa ndị akọwapụtara.
Ọmụmaatụ, Uhie ma ọ bụ Debian Onye ndu ụlọ ọrụ ihe nkesa, SUSE na njikwa, na ikekwe Canonical na Ubuntu na desktọọpụ.
Ee Canonical con Ubuntu Ndi nwe anyi, n’ihi na ulo oru ma obu ulo oru ozo nwere ike inye ihe yiri ya bu Mandriva, nke di n’ime nsogbu. - Debian, Arch, Pardus, Chakra, ọtụtụ distros nwere ike inye onye ọrụ obere ngwaike na-ewe ahụmahụ ee, mana n’azụ distros ndị a enwere CIA?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » SUSE Linux VS Ukpu okpu?
Mandriva, nke dị na ọdụ
Gị na Mandriva emeela agadi, ọ dị tupu.
Theselọ ọrụ ndị a na-enye m ogwu ọjọọ
Eeh, ama m na ọ bụ Mageia ugbua… 😉
Batman, m na-ahọrọ nke ikpeazụ, ọ bụghị Mandriva ọ bụ ezie na ị maara na ha abụọ dị.
Adịghị m mma na ụlọ ọrụ, ha chọrọ ime ihe niile n'ụzọ ha ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha agbaghaa ya
Ndewo, kedu ka ị mere, nke ọma, ebe m bụ onye na-ese ihe osise, m ga-eji ọtụtụ linux, ị maara ihe niile gbasara adobe wdg okpu ... daalụ
eme nzuzu ya n'ọnụ ụzọ. ekele maka imefusị oge m na-eme anyị niile onye nzuzu
Iji Disqus dị ka sistemụ ịza ajụjụ